XIRIIR QARSOON: Halkii sano ee ciqaabta Madrid & Pellegrini, Wayihii Cr7 ee Manchester Derby, saxiibada qol labis wadaagay ee kulankaan isaga hor imaan doona, Madrid Deryb & Aguero oo qiso xanuun badan ah +SHEKOYIN KALE Published on April 26, 2016 by Hassan Iniesta · No Comments · | Haqabtire News
XIRIIR QARSOON: Halkii sano ee ciqaabta Madrid & Pellegrini, Wayihii Cr7 ee Manchester Derby, saxiibada qol labis wadaagay ee kulankaan isaga hor imaan doona, Madrid Deryb & Aguero oo qiso xanuun badan ah +SHEKOYIN KALE Published on April 26, 2016 by Hassan Iniesta · No Comments ·
Kullnati wacan aqristayaasheena sharafta naga mudan meelkasta oo aad joogtaan, kusoo dhawaada xubin gaar ah oo aan ku egeyno xiriirada qarsoon ee hore u dhaxmaray ciyaartooyda iyo macalimiinta kooxaha Real Madrid iyo Manchester City oo caawa Afar dhamaadka Champions League ku balansan.
Tababaraha City Pellegrini ayaa masuul ka ahaa Madrid 2009/10,waxaana lagu badalay Mourinho inkastoo uu rikoor 96 dhibcood uruursaday, laakiin kaalinta labaad ee La Liga ayay u gaaleen waqtigaas kooxda Barcelona.
Kooxdiisa ayaa ka reebtay UEFA Champions League wareega 16ka Olympique Lyonnais ,iyadoo Copa del Rey ay sidookale ka reebtay kooxda herka sadexaad ee Alcoron.
Sergio Ramos, Pepe, Marcelo, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema iyo Álvaro Arbeloa ayaa kaliya ka badbaaday kooxdii Madrid ee tababare uu u ahaa Pellegrini.
Pellegrini ayaa ahaa tababaraha Villarreal intii u dhaxeysay 2004 ilaa 2009 – kooxdiisa ayaa ku dhameystay kaalinta labaad ee La Liga oo ay qaaday Madrid 2007/08 – Málaga CF ayuu sidookale hogaaminayay 2010 ilaa 2013.
Waxa uu yahay rikoorka uu ka heysto Madrid kulamada uu wajahay 3, guul 5,barbaro iyo 10 qasaaro;
khasaaraha ugu weyn ee uu ka helay Maadrid waa 5-0 oo ay isagoo hogaaaminaya Villarreal bishii September 2007 lagu dhuftay iyo 7-0 (March 2011) iyo 6-2 (May 2013) lagu garaacay Bernabeu isagoo hogaaminayay Malaga.
Ronaldo ayaa wajahay City isagoo ka tirsanaa kooxda y xafiiltamaan ee Manchester United intii u dhaxaysa 2003 iyo 2009, isagoo 84 gool u dhaliyay United 196 kulan oo Premier League ah. Waxa uu ku guuleystay horyaal 2007, 2008 iyo 2009, waxaana uu dhaliyay gool finalkii UEFA Champions League 2008, markaasoo Sir Alex Ferguson uu ku garaacay Chelsea rigoorayaal Moscow.
Ronaldo ayaa sidoo kale guuldaro kala kulmay Barcelona 12 bilood ka dib Finalka tartankaan, markii uu saftay kulankiisii ugu danbeeyay ee United ka hor inta uusan u dhaqaaqin Madrid.
rikoorka Ronaldo ee ka dhanka ah kooxda City isagoo aha United waa W7 D1 L3. Waxa uu ka dhaliyay mudadaas afar gool – waxaana laga saaray garoonka laba kamid ah kulamada uu kaga hortagay Manchester City Horyaalka Ingiriiska.
Sergio Aguero ayaa ku guuldareysatay inuu garaaco Real Madrid muddo shan sano ah oo uu wajahayay isagoo katirsanaa kooxda Atlético Madrid intii u dhaxeysay 2006 iyo 2011, ,Rikoorkiisa ka dhanka ah Madrid waa D3 L8, isagoo ka dhaliyay seddex gool – wayihiisii Atlético.
Gareth Bale ayaa ka dhaliyay gool isagoo katirsan Tottenham Hotspur FC ciyaar 3-1 kaga badiyeen City ,April 2013 inkastoo guuldaro 3-2 bishii January 2012 ku dhufteen.
Luka Modric iyo Bale waxay wadaageen qolka labiska kooxda Tottenham iyagoo 1-0 uga badiyay City May 2010 waxaana ay aheyd markii ugu horeysay ee shahaadada UEFA Champions League kasoo muuqdaan kooxdooda.
Arbeloa oo hadda ka tirsan Real Maadrid ayaa gool ka dhaliyay City ciyaar 1-1 ah kusoo dhamaatay waqtigasoo uu katirsana Liverpool bishii February 2009.
David Silva, Jesús Navas & Sergio Ramos, Nacho Fernández iyo Isco (Spain);
Fernandinho & Marcelo iyo Casemiro (Brazil)
Laba jeer ayuu horyaalka Spain la qaaday Barcelona, Yaya Touré oo shan jeer ka wajahay Madrid, waxaana ay ka badiyeen seddex jeer iyadoo laba uu badiyay.
Silva (RC Celta de Vigo, Valencia CF), Pablo Zabaleta (Espanyol), Nicolas Otamendi (Valencia), Martín Demichelis iyo Willy Caballero (labada Málaga CF) iyo Jesús Navas (Sevilla FC) ayaa dhamaantood waxay Horyaalka Spain ku wajaheen kooxda Madrid haddase waxay ka tirsan yihin City.
Danilo iyo Fernando waxay wadageen qolka labiska kooxda Porto intii u dhaxaysay 2012 iyo 2014.
Benzema ayaa gool ka dhaliyay Joe Hart markii France barbaro 1-1 la galeen England UEFA EURO 2012, Samir Nasri – oo kooxda City katirsan ayaa waqtigaas u ciyaaray France.